I-PDF Arranger 1.2.0: inguqulo entsha yethuluzi lokuqhafaza lokukhohlisa i-PDF | Kusuka kuLinux
I-PDF Arranger 1.2.0 inguqulo entsha yaleli thuluzi lokuqhafaza ukuphatha amafayela ngefomethi ye-PDF. Iyahambisana neLinux futhi ifaka phakathi ukuthuthuka kulokhu kukhishwa kwakamuva, njengezinqamuleli zekhibhodi, ukuthunyelwa kwemethadatha, izimbungulu ezilungisiwe nokuningi. Kulabo kini abangayazi i-PDF Arranger okwamanje, iyithuluzi lomthombo wamahhala nelivulekile eliyimfoloko yesoftware ye-PDF-Shuffler. Le software ayikabuyekezwa kusukela ngo-Ephreli 2012 futhi i-PDF Arranger iza ukuvusa ikhodi yale phrojekthi eshiyiwe.
I-PDF Arranger isekelwe ku IPython 3 kanye nelabhulali yehluzo ye-GTK3 ngokwakhiwa kwayo, futhi njengamanje ithathe elinye igxathu eliya phambili ekuthuthukiseni nge-v1.2.0 njengoba siphawula. Uma ufuna ukufaka leli thuluzi ku-distro yakho, liyatholakala kokunye okubaluleke kakhulu kwama-distros athandwa kakhulu. Ungalanda futhi ikhodi yomthombo bese uyihlanganisa kusuka ku- iwebhusayithi ye-GitHub yephrojekthi, lapho kuzophinde kube khona kanambambili ngeWindows.
Kepha yini okusha ku-PDF Arranger 1.2.0:
Izinqamuleli zekhibhodi +/- ukusondeza, c ukuvula ingxoxo, Ctrl + Left / Right to Rotate 90 or -90 degrees kungeziwe.
Ngaphezu kwalokho, uhlelo luzokhumbula usayizi wewindi noma isimo sokukhulisa kanye nezinga lokusondeza ngesikhathi esizayo lapho uvula iwindi.
Izithonjana ziqondaniswe kwesobunxele nangaphezulu futhi ngaleyo ndlela zenza umugqa nomfaniswano wesikhala.
Ingxoxo yenziwe kabusha futhi isipiliyoni senziwe ngcono kulokhu.
Ukunikezwa kwezithonjana lapho kusondeza isithombe, okungukuthi, kwezithonjana. Lokhu manje kufanele kulungele ukufiphaza lapho kusondeziwe.
Ukusekelwa kwamafayela amaningi e-PDF
Imethadatha yoqobo igcinelwa ukuthekelisa
Ukuhumusha kwenziwe ngcono, ikakhulukazi olimini lwesiJalimane.
Ezinye izimbungulu ezikhona kuzinguqulo ezedlule nazo zilungisiwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-PDF Arranger 1.2.0: inguqulo entsha yethuluzi lokuqhafaza lokukhohlisa i-PDF
Sawubona, uyazi ukuthi ingabe isendaweni yokugcina impahla engu-9? Ngingayifaka kanjani ngemigqa yomyalo ku-terminal? Ngiyabonga